हजुरबा र हजुरआमाको विवाह, छोराबुहारी, नातीनातिना जन्ती !::Hamrodamak.com
हजुरबा र हजुरआमाको विवाह, छोराबुहारी, नातीनातिना जन्ती !
छोराहरू बुबालाई दुलहाको पोसाक लगाइदिन्छन् । कुनै टेलिसिरियल वा कथामा होइन, यथार्थमै।
काठमाडौं । हजुरबा बेहुला, हजुरआमा बेहुली । अनि छोरानाति जन्ती । बुहारीहरूले सासूलाई बेहुली बनाएर भित्र्याउँछन् । छोराहरू बुबालाई दुलहाको पोसाक लगाइदिन्छन् । कुनै टेलिसिरियल वा कथामा होइन, यथार्थमै।
सुन्दै अचम्म लाग्ने यो चलन रामेछापको टोकरपुरका मगर समुदायमा भने सामान्य भइसक्यो । युगौंदेखिको परम्परा। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा रामेछापबाट टीकाप्रसाद भट्टले लेखेका छन्।
मगर समुदायमा भागी विवाह गर्ने चलन छ । करिब ९० प्रतिशतले भगाएकै हुन्छन् । त्यसैलाई औपचारिकता दिन उनीहरू समय मिलाएर समाजलाई साक्षी राखी धुमधामसँग बिहे गर्छन् । भागेर आएका जोडीले जति बूढो भए पनि औपचारिक विवाह नगरी सामाजिक मान्यता पाउँदैनन्।
‘अरूको के कुरा, मैले नै ३ जना छोरा लाठे भएपछि गत वर्ष बल्ल विवाह गरेँ,’ स्थानीय शिक्षक निलबहादुर मगरले भने, ‘हाम्रो चलनै यस्तै छ ।’ अर्का स्थानीय पूर्णबहादुर मगरले ७० वर्ष कटेपछि बल्ल बिहे गरे । त्यतिबेला उनका नातिनातिना नै जवान भइसकेका थिए । बिहे गरेको केही समयमै उनको मृत्यु भयो।
भागेर जाने चेलीलाई माइतीले सहजै नस्विकार्ने भएकाले विवाह गर्न ढिलाइ हुने गरेको हो । माइतीको सहमति पर्खंदासम्म उनीहरूको उमेर छिप्पिइसकेको हुन्छ । छोराछोरीका आमाहरू बेहुली बनेर श्रीमान् र जन्ती साथै लगी माइत जान्छन्।
बेहुलीले माइती पक्षलाई श्रीमान् देखाउँदै दुलहा स्विकार्न अनुरोध गर्छिन् । माइती पक्षले दुलहा स्विकार्दा ठेकी समाउन दिने चलन छ । त्यसलाई शुभसगुन मानिन्छ । माइतीले ठेकी समाउन दिने सन्देश पठाएपछि मात्र दुलहा पक्ष बिहेका लागि जान पाउँछ ।
विवाहमा एक रात पूरै बित्छ । इष्टमित्र बोलाइन्छन् । राँगा काटेर भोज हुन्छ । ‘टीका लगाएर पैसा हाल्ने धेरै हुन्छन्, चेलीबेटीले सगुन दिने चलन छ । ठूलो परिवारमा ८०–९० जनासम्म चेलीबेटी हुने भएकाले वैवाहिक कार्यक्रम लम्बिन्छ,’ स्थानीय लवबहादुर मगरले भने।
दुलही लिएर घर फर्केपछि फेरि दुलहा पक्षको भोज चल्छ । बाबुआमाको विवाहमा छोराछोरीले सघाउँछन् । दोरम्बा गाउँपालिकाको टोकरपुरका सिगार्चे, निङ्ग्रे, साल्मेलगायत क्षेत्रमा झन्डै ४ सय परिवार मगरको बसोबास छ । ती तीनै गाउँमा यस्तो चलन छ।